တစ္ေခတ္ တစ္ခါက အႏုပညာ ေမာင္ႏွမေတြနဲ႕ရိုက္ကူးထားတဲ့ ပံုေတြကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀လာတဲ့ လြင္မိုး – Cele Posts
တစ္ခ်ိန္တုန္းက အႏုပညာ ေလာကမွာ ဒိတ္ဒိတ္ၾကဲေအာင္ျမင္မႈေတြ သိမ္းပိုက္ထားခဲ့တဲ့ ေဒြး၊လြင္မိုးနဲ႔ ထက္ထက္တို႔ အႏုပညာရွင္ ေမာင္ႏွမေတြကိုေတာ့ မခ်စ္ဖူးခဲ့တဲ့ သူရွိမယ္ မထင္ပါဘူးေနာ္။ အႏုပညာေလာက မွာ အတြဲညီညီနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ရသအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးစြမ္း နိုင္ခဲ့ၾကတဲ့ သူတို႔ေတြကေတာ့ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုၾကာျမင့္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မွာေတာ့ ထက္ထက္ တစ္ေယာက္သာ အႏုပညာေလာကထဲ က်န္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရမွာပါ။
ကိုသားႀကီးကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ လူ႔ေလာကႀကီးကို အေစာဆုံးႏႈတ္ဆက္ထြက္ခြာ ခဲ့သလို လြင္မိုးကလည္း အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈ ေတြရပ္နားၿပီး စီးပြားေရးကိုပဲ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားေပးေနတဲ့ပရိသတ္ေတြ အတြက္ လူမႈကြန္ရက္ကေန တဆင့္ တေန႔တာအေၾကာင္းအရာေလးေတြ မၽွေဝေပးေလ့ရွိသလို ဒီေန႔မွာေတာ့ ဟိုးတခ်ိန္တုန္းက ပုံရိပ္ေလးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမွတ္တရစကား တခ်ိဳ႕ကိုမၽွေဝလာပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တုံးက..ကၽြန္ေတာ္တို႔ အႏုပညာ..ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြ.. ဦးလွထြန္း..ရဲ့ကင္ဆာေဖာင္ေဒးရွင္းကို သြားၾကတာပါ.. ေန႔ရက္ေတြေတာ့မမွတ္မိေတာ့ပါဘူး…႐ုပ္ရွင္အစည္းအ႐ုံးကစီစဥ္တာပါ.. ဥကၠဌ..ဦးစိန္တင္ လက္ထက္ကပါ..မွတ္မိေနတာတခုက..အားလုံးျမန္မာဆန္ဆန္ဝတ္စားလာရမယ္ ဆိုလို႔..အားလုံးကပုံမွာျမင္ရတဲ့ အတိုင္း..ညီညြတ္ေနက်တာပါ.. ကိုသားႀကီး တေယာက္ပဲ..အေစာႀကီးကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔လမ္းခြဲႏႈတ္ဆက္ သြားခဲ့တာပါ..က်န္တဲ့သူေတြကေတာ့..နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔..ရွင္သန္ေနက်ရဦးမွာပါ…. ဆိုၿပီး ေရးသားမၽွေဝ လာပါတယ္။
တခ်ိန္တုန္းက ပရိသတ္အခ်စ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့တဲ့ ေဒြး၊လြင္မိုးနဲ႔ ထက္ထက္တို႔ရဲ့ အမွတ္တရ ပုံရိပ္ေလးကေတာ့ ၾကည့္မိသူတိုင္းကို အရင္တုန္းက အတိတ္ေတြကို လြမ္းဆြတ္ေစမိမွာ အမွန္ပါ။ အတြဲညီညီနဲ႔ ပရိသတ္အခ်စ္ သိမ္းပိုက္နိုင္ခဲ့တဲ့ သူတို႔ေတြထဲက ေဒြးကေတာ့ အေစာႀကီးႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာခဲ့ေပမယ့္ က်န္တဲ့သူေတြကေတာ့ လြင္မိုးေျပာခဲ့ သလိုပဲ ေလာကဇာတ္ခုံမွာ နည္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ က်င္လည္ေနရဦးမွာ အမွန္ပါပဲ ပရိသတ္ႀကီးေရ..
တစ်ခေတ် တစ်ခါက အနုပညာ မောင်နှမတွေနဲ့ရိုက်ကူးထားတဲ့ ပုံတွေကို ပြန်လည် မျှဝေလာတဲ့ လွင်မိုး
တစ်ချိန်တုန်းက အနုပညာ လောကမှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲအောင်မြင်မှုတွေ သိမ်းပိုက်ထားခဲ့တဲ့ ဒွေး၊လွင်မိုးနဲ့ ထက်ထက်တို့ အနုပညာရှင် မောင်နှမတွေကိုတော့ မချစ်ဖူးခဲ့တဲ့ သူရှိမယ် မထင်ပါဘူးနော်။ အနုပညာလောက မှာ အတွဲညီညီနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ရသအမျိုးမျိုးပေးစွမ်း နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ သူတို့တွေကတော့ အချိန်ကာလ တစ်ခုကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက် မှာတော့ ထက်ထက် တစ်ယောက်သာ အနုပညာလောကထဲ ကျန်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ကိုသားကြီးကတော့ အောင်မြင်နေတဲ့ အချိန်မှာ လူ့လောကကြီးကို အစောဆုံးနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာ ခဲ့သလို လွင်မိုးကလည်း အနုပညာလှုပ်ရှားမှု တွေရပ်နားပြီး စီးပွားရေးကိုပဲ ဇောက်ချလုပ်ကိုင် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေ အတွက် လူမှုကွန်ရက်ကနေ တဆင့် တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေ မျှဝေပေးလေ့ရှိသလို ဒီနေ့မှာတော့ ဟိုးတချိန်တုန်းက ပုံရိပ်လေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရစကား တချို့ကိုမျှဝေလာပါတယ်။ တစ်ချိန်တုံးက..ကျွန်တော်တို့ အနုပညာ..ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ.. ဦးလှထွန်း..ရဲ့ကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကို သွားကြတာပါ.. နေ့ရက်တွေတော့မမှတ်မိတော့ပါဘူး…ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကစီစဉ်တာပါ.. ဥက္ကဌ..ဦးစိန်တင် လက်ထက်ကပါ..မှတ်မိနေတာတခုက..အားလုံးမြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စားလာရမယ် ဆိုလို့..အားလုံးကပုံမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်း..ညီညွတ်နေကျတာပါ.. ကိုသားကြီး တယောက်ပဲ..အစောကြီးကျွန်တော်တို့နဲ့လမ်းခွဲနှုတ်ဆက် သွားခဲ့တာပါ..ကျန်တဲ့သူတွေကတော့..နည်းမျိုးစုံနဲ့..ရှင်သန်နေကျရဦးမှာပါ…. ဆိုပြီး ရေးသားမျှဝေ လာပါတယ်။
တချိန်တုန်းက ပရိသတ်အချစ်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့ ဒွေး၊လွင်မိုးနဲ့ ထက်ထက်တို့ရဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးကတော့ ကြည့်မိသူတိုင်းကို အရင်တုန်းက အတိတ်တွေကို လွမ်းဆွတ်စေမိမှာ အမှန်ပါ။ အတွဲညီညီနဲ့ ပရိသတ်အချစ် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူတို့တွေထဲက ဒွေးကတော့ အစောကြီးနှုတ်ဆက် ထွက်ခွာခဲ့ပေမယ့် ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ လွင်မိုးပြောခဲ့ သလိုပဲ လောကဇာတ်ခုံမှာ နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျင်လည်နေရဦးမှာ အမှန်ပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ..